Okulandelayo | Abaqeqeshi be-NextMping ™
Abaqeqeshi be-NextMping ™
Ingabe uzizwa uqiniseka ngekusasa? Ingabe ujabule ngamathuba akho nebhizinisi lakho ngokuzayo? Ingabe inkampani yakho inamasu namathuluzi okuhola ushintsho?
Abaqeqeshi nabacebisi bethu be-NextMping ™ bazokunikeza ngohlaka, ukusekelwa kanye nokuholwa ekwakheni ikusasa lakho elihle kakhulu. Wonke umuntu ophumelelayo usebenzisa umqeqeshi webhizinisi noma ubuholi bokuqeqesha ngendlela yomeluleki / umqeqeshi / umqondisi.
Abaqeqeshi bebhizinisi lethu abaqinisekisiwe be-NextMping ™ bazosebenzisana nawe ukwakha isu, ukukhuthaza ikusasa lakho le-mindset yokusebenza futhi kukusize uthuthukise amakhono adingekayo kuwe ukuze uchume futhi udlulele ezikhathini ezishintshashintshayo zokuhamba komfundi nezishintsha ngokushesha.
Hlangana nabaqeqeshi bethu be-NextMping ™
UCheryl Cran ungumsunguli we-NextMiling ™ / NextMiling.com kanye no-CEO wenkampani yabazali Synthesis kwa-Work Inc.
Kwamukelwa njenge- # 1 Ikusasa Lomsebenzi eliqhutshwa ngu-Onalytica, nomlobi wezincwadi eziyi-9 kufaka nohlelo lwesibili lwe- “I-NextMiling ™ - i-Aniticape, Zulazula bese udala Ikusasa Lomsebenzi”Nomngane ibhuku lokusebenzela. Ezinye izihloko zamabhuku zifaka "Ubuciko Bobuholi Bokuguqula - Ukushayela Ukushintshwa Kwindlela Eisheshayo Yomhlaba"(Wiley 2015),"Izindlela ze-101 Zokwenza iGenerations X, Y neZoomers zijabule emsebenzini”(2010) nezinye izincwadi ezi-4 zamakhono amakhulu wokuhola adingekayo ukuze ube nekusasa lomsebenzi ulungele.
Ikusasa lobuholi bomcabango womsebenzi kaCheryl lifakiwe ezincwadini ezifana noHuff Post, Forbes, IABC Magazine, Law Magazine, Metro New York, Entrepreneur Magazine, Readers Digest, CBS Online, NBC Online, Fox Online nokuningi. Sekuyiminyaka engaphezu kwamashumi amabili uCheryl akhe idumela lokuletha inani elingavamile kumakhasimende afaka i-AT & T, iBell Mobility, i-Omnitel, iGartner, iBritish Telcomm, iManulife, kanye nezinkampani eziphakathi nendawo nosomabhizinisi ezimbonini ezibandakanya ubuchwepheshe, ezempilo, ezolimo, ezezimali, umshuwalense nokuningi.
I-NextMping ™ yathuthukiswa njengophawu lwebhizinisi lokuphathelene elihlanganisa wonke umsebenzi nocwaningo lukaCheryl ngekusasa lomsebenzi nobuholi obudingekayo ukuze kuguqulwe izinguquko emsebenzini. Isikhathi sokuzwa hhayi ngekusasa nje kepha ukusebenzisa i-NextMapping ™ ukufika lapho! Ubuchwepheshe emsebenzini kufanele busetshenziselwe ukulungiselela ikusasa kugxilwe ekutheni ubuchwepheshe bungayithuthukisa kanjani imiphumela yabantu.
Ingqikithi ejwayelekile yawo wonke umsebenzi wokuphila kaCheryl iyindlela 'yabantu kuqala' kanye nendlela yesibili yedijithali yokwakha ikusasa lomuntu, ukusiza izinkampani ukwakha amandla obuholi adingekayo 'ukuguqula umhlaba ngebhizinisi.'
Xhuma nathi namuhla!
UCrystal Metz ungusomabhizinisi ophumelele kakhulu nomholi weqembu. Kuyasithokozisa ukuba neCrystal njengosomabhizinisi wethu ogxile kwi-NextMiling ™.
Njengomqeqeshi we-NextMapping ™, uCrystal uletha idrayivu, intshiseko kanye nerekhodi eliqinisekisiwe lokusiza amakhasimende akhe ukudala impumelelo ethe xaxa, izithiyo eziphumelelayo zempumelelo futhi wakhe amasu amasha wokwenza okulandelayo.
Ungumnikazi weCrystal Metz Insurance, inkampani yomshuwalense engu- # 1 Selokhu i-Crystal Metz yomshuwalense isungule izimbangi zayo futhi ngaphansi kobuholi bukaCrystal iyaqhubeka nokukhula yize isembonini eshintsha ngokushesha unyaka nonyaka. UCrystal uthi impumelelo yakhe njengosomabhizinisi ngokuzalwa nokukhuliswa emndenini wezolimo. Emncane, wafunda amakhono okuphatha, ukuzikhandla nokukhuthazela kanye nothando lwebhizinisi.
Usomabhizinisi kusukela esemncane, esanda kweva eminyakeni engu-20 uvule inkampani yakhe yezindlu, NGEKHULU 21 iMedellis Realty. Lokhu kweqa kuphoqe uCrystal ukuthi afunde ngokushesha okukhulu, ajwayele ukuhola iqembu ngenkathi eqonda izici ezibalulekile zebhizinisi. Eminyakeni emi-5 egijime futhi waqhuba ilungelo lakhe lokuthenga izindlu nomhlaba, ukukhula kwakhe nolwazi lokuthi yini okufanele ayenze nokungafanele akwenze kwakuyizifundo ezazifundwa futhi azikhohlwa. UCrystal ushintshe ukugxila kwakhe kwezamabhizinisi emshuwalense futhi wavula umshuwalense weCrystal Metz. Ubonga impumelelo yakhe eqenjini lakhe - uzakhele ibhizinisi lakhe ngokuthola abantu abafanele nokwabelana ngobuholi. Ukwethembeka kweqembu lakhe nokuzibandakanya kwakhe kungenye yezinto azifezile aziqhenya ngazo njengosomabhizinisi. Isitayela sobuholi bukaCrystal ukubamba okulindelwe nezindinganiso eziphakeme ngenkathi eqeqesha futhi ehola iqembu lakhe ngokwesiko lobuholi elabiwe.
Njengomshayeli we-NextMapping ™ we-Crystal's drive wokuphumelela kanye nokugxila kwakhe kubantu yizipho zakhe ezinkulu kakhulu. Uphonsela inselelo abantu ukuthi bahlole ukuthi yini ebenza bajabule njengosomabhizinisi futhi njengomuntu abese enikeza ugqozi namasu okukusiza ukuba wenze lokho.
Umdlandla wakhe ukusiza abantu ukwakha futhi baqinise amakhono abo, bathole ukuzethemba, babasize bakhule futhi bakwazi ukufeza okungenakwenzeka.
I-Crystal isiza osomabhizinisi ngocwaningo lwemakethe, ibhizinisi, izixazululo zeqembu kanye nokuhlelwa kwamasu. Njengomqeqeshi we-NextMapping ™ Crystal kuzosiza ibhizinisi lakho ukuthi likhule lifinyelele ezingeni ongakaze ulicabange. Uletha inani elikhulu njengomqeqeshi wosomabhizinisi ohamba ngezinyawo futhi onerekhodi elihle lokuphumelela.
Ukwazi kabanzi nge-Enterpriseur Coaching nge-Crystal iya lapha: https://nextmapping.com/nextmapping-coaches/entrepreneur-coaching/
Njengomqeqeshi wobuholi be-NextMping ™ uReg unesizinda esibanzi njengomholi ophezulu ebhizinisini iminyaka engaphezu kwengu-25.
Isizinda sakhe sifaka umsebenzi ohlonishwayo embonini yamabhange, ukuthuthukisa amasu we-e-commerce kwezimbili zezitolo ezinkulu zaseCanada (Best Buy and future Shop) kanye njengosomabhizinisi kanye nomnikazi wezinkampani ezintathu eziphumelelayo.
U-Reg unolwazi olubanzi lwebhizinisi nokubonisana kubandakanya ukwakhiwa kwenhlangano nentuthuko, ukuhlaziya izingxabano nokuphatha, ubuholi nokuthuthukiswa kweqembu namasu aphumelelayo we-e-commerce kanye nokwenza.
Imfundo kaReg ifaka iMasters of Arts Degree in Conflict Analysis & Management evela eRoyal Roads University.
Uzibophezele ekusizeni ukuguqula intuthuko nokukhula kwamabhizinisi kanye nabasebenzi kuwo wonke amabanga ngokunikela ngezixazululo ezintsha, zokudala ezingagqugquzeli futhi zinike amandla ukusebenza okuphezulu nokukhula kepha kuvumela nezinkampani ukuthi zithole, zivule futhi ziveze lokho okungenzeka ngakunye kwazo abasebenzi.
Uthando lukaReg ukusiza abaholi ukuthi bandise ukuzibandakanya kwamaqembu kanye nokusiza abaholi abaphakathi naphakathi ukuba banyukele ezikhundleni eziphezulu.
Abaholi kanye namalungu eqembu uReg athe awaqeqesha ngokuqhubekayo asho ukuthi uhlinzeka ngomongo obalulekile, imininingwane namathuluzi okubasiza baphumelele emsebenzini.
Isitayela sikaReg njengomqeqeshi we-NextMapping ™ siqondile, sihlaziya futhi sinamasu ngokugxila ekusizeni abantu ukuba baphumelele.
U-Ashley Farren ungumqeqeshi oqeqeshiwe we-NextMping ™ kanye nomeluleki. Siyajabula ukuba no-Ashley eqenjini le-NextMiling ™.
U-Ashley unokuqonda okukhulu, amasu futhi uyasebenzisana. Unomlando omkhulu wempumelelo ezinhlelweni zamasu ezinkampani zomhlaba.
Umlando wakhe wempumelelo ubandakanya iminyaka ye-12 eSwitzerland ezindimeni ze-HR Business Partner ezihlelwayo ezisebenzela izinkampani zeMultinational kuyo yonke imikhakha ehlukahlukene kubandakanya iHi Tech, i-FMCG, iMining.
Iminyaka eyisi-6, u-Ashley wasebenzela i-Autodesk, ehola ngobuchule umsebenzi we-HR womsebenzi we-Global Engineering kufaka neziza ezimbili ezinkulu ezingasolwandle eSingapore naseShanghai (abasebenzi abangu-1200) namaqembu ase-US naseYurophu.
Ngaphambi kwalokhu, uchithe iminyaka eyi-12 e-Unilever esebenza e-Asia, e-Afrika, eMiddle East esekela imisebenzi eminingi yamabhizinisi (kufaka phakathi i-IT (Ingqalasizinda nezinhlelo zebhizinisi) / ikhasimende / ukuthengisa, ukumaketha kanye nabaphathi bokufunda nokuthuthuka.
Ngalesi sikhathi weseka Inhlangano Yengqalasizinda ezingeni lesifunda isungula umsebenzi wenkonzo owabiwe emhlabeni wonke, futhi ulawula ukuqaliswa kokusebenza kwe-Afrika yonke kanye nase-Middle East, ngaphezu kwalokho ulawula imizamo emikhulu yokulethwa kwezinsiza.
Ngesikhathi sakhe seminyaka yokusebenza kwe-22, u-Ashley wenze lula futhi walawula izinguquko ezinkulu zenhlangano ezibandakanya ukuhlelwa kabusha / ukuhlelwa kabusha okuningi. Unezindlela zokuhola nokuphathwa kokuhola phambili, usungule izinqubo zokuphatha ithalente kanye nokwenza umsebenzi, wasebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokubandakanya nokubandakanya abaqeqeshi nabaphathi abaphezulu, izinhlelo zokubandakanya abasebenzi, wenza lula ukusungulwa kwezinqubo ze-HR.
UHélène Hamilton ungumqeqeshi oqinisekisiwe we-ICF futhi uletha okuhlangenwe nakho okunhlobonhlobo namasu amaningi empumelelo yamakhasimende eqenjini le-NextMiling ™.
Isizinda sakhe sifaka iminyaka engaphezu kwengu-30 yesipiliyoni sokuhola kubandakanya iminyaka engu-15 njengesikhulu esiphezulu. UHélène uletha ubungcweti ekuthuthukisweni kwenhlangano kanye nabasebenzi. Amakhasimende akhe ayabonga ikhono lakhe lokuwasiza ngezisombululo zokudala ezweni eliya liba nzima.
Ubuye abe ngumlobi we- “The Best Kept Imfihlo Yokubandakanya Abasebenzi” (2017) futhi uqinisekisiwe kuProfayili yeNovava namanye amathuluzi obuholi.
Izimboni asebenza nazo zifaka ezezempilo, izimboni zomphakathi, ezemfundo kanye namabhizinisi amancane.
Isikhungo sikaHélène kanye namaklayenti abaqeqeshi bakhe babonga ikhono lakhe lokuthola umongo masisha, indlela yakhe yokucabanga amasu nendlela yakhe eguqukayo yokusiza abaholi namalungu eqembu ekwakheni ngamandla abo ukuze babe nekusasa elilungele manje.
Silungele ukuxhumana nathi futhi sisebenzisane nabaqeqeshi kanye nabaqeqeshi bethu be-NextMiling ™?
Sikukhulumile - finyelela, singathanda ukuxhumana nawe.
I-NextMapping ™ inqubo yethu yokuphathelene esiza izinhlangano, abaholi, amaqembu kanye nabosomabhizinisi ukukhulisa amakhono abo ukuzulazula nekusasa futhi babe ngaphambi komsebenzi abalungele manje.
Ikusasa Lezifundo Ezi-inthanethi
Ukufundisa ubuholi ngokuxhaswa ngokuzimela kwabaqeqeshi kubaholi ukukhulisa amakhono abo ukuze babe nekusasa elilungele manje.